चार घण्टा चार्ज गरेपछि १२० किलोमिटर चल्ने कार बनाउँदै सरोज चेपाङ…हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
चार घण्टा चार्ज गरेपछि १२० किलोमिटर चल्ने कार बनाउँदै सरोज चेपाङ…हेर्नुहोस् ।
चितवन : एक सिटको प्यारा’मोटर नि’र्माण गरी सफल परी’क्षण समेत गरेका चितवन गड्यौ’लीका सरोज चेपाङ अहिले वि’द्युतीय कार र प्या’रामोटर बनाउन व्य’स्त छन् ।
राप्ती नग’रपालिका–२ गड्यौ’ली मिलन टो’ल बस्ने युवा वैज्ञा’निक सरोजले पेट्रो’लबाट चल्ने कारलाई परि’वर्तन गरी चा’र्ज गरेर चलाउन मिल्ने कार बनाइरहेका छन् ।दुई वर्षअघि रा’प्ती न’दी कि’नारमा प्या’रामोटरको सफल परी’क्षण गरेका चितवनका सरोज चेपाङले अहिले वि’द्युतीय का’र नि’र्माण गरेका हुन् ।
चा’लकसहित पाँच जनाको क्ष’मता भएको पेट्रो’लबाट चल्ने का’रलाई परिव’र्तन गरी चा’र्जबाट चल्ने बनाएका हुन् ।
उनले सो गाडी परी’क्षण पनि गरिसकेका छन् । ४ घण्टा चा’र्ज गरेपछि १ सय २० कि’लोमिटर चल्ने उनको दाबी छ । उनले नयाँ कार बनाउँदा १० लाखदेखि १२ ला’खसम्म ख’र्च हुने बताए ।
पाँच जना क्ष’मताको कारसँगै उनले तीन पां’ग्रे कार पनि बनाइरहेका छन्, जसमा दुई जना मात्र च’ढ्न मिल्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रामेश्वर अधि’कारीले अ’र्डर गरेकाले तीन पां’ग्रे कार बनाएको सरोजको भनाइ छ ।
एयर बोट बनाएर पोखरीमा प’रीक्षण गरेपनि त्यसले त्यति च’र्चा पाएन तर, अहिले पाँच वटा एयरबोट अर्ड’र आएको उनले बताए । उनीसहित डा. रामेश्वर अधिकारी, चिर’ञ्जिवी ओली, रोमा’न्च डल्लाकोटी र सन्तबहादुर चेपाङ मिलेर ‘सरोज चेपाङ प’रीक्षण तथा प्र’शिक्षण के’न्द्र’ द’र्ता गराएका छन् ।
उक्त के’न्द्रले एयर ए’म्बुलेन्स र ३२ सिटे बस नि’र्माण गर्ने यो’जना बनाएको छ । सी’मान्तकृ’त समुदायको रुपमा चेपाङ समुदायलाई लिइन्छ । प्यारा’मोटर बनाएर सफल परी’क्षण गरेपछि सं’घीय सरकार र बागमति सरकारले समेत युवा वै’ज्ञानिकका रुपमा सम्मान गरिसकेको छ ।
Previous गौतमबुद्ध अन्तर्रा’ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य ती’ब्र, चीनमा रोकिएका निर्माण साम’ग्री आउँदै..हेर्नुहोस् !
Next कोरो’ना प्रभा’वित फुट’बलक’र्मीलाई राहत दिन एन्फाले गरेको प्रस्ताव फिफा द्वारा स्वीकृत..हेर्नुहोस् ।